संयुक्त राष्ट्र - अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग को प्रकारका एक। संगठन उद्देश्य शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र दुई देशहरू बीच सहयोग को बलियो बनाउँछ र विकास कायम छ।
तंत्र को विकास मा पहिलो कदम र आंशिक संयुक्त राष्ट्र चार्टर को उन्नाइसौँ शताब्दीको बीचमा विकास गर्न थाले। अधिकतम बढावा संगठन को विकास 1942 मा द्वितीय विश्व युद्ध मा शत्रुता को प्रकोप बाट प्राप्त भयो।
मिति, वैज्ञानिकहरू जो बारेमा देश को सिर्जना पहिलो चरण लिएको छ तर्क संयुक्त राष्ट्र। पश्चिमी वैज्ञानिकहरू कागजात संयुक्त राष्ट्र चार्टर को स्थापना certifying कि दावी, को थियो अटलांटिक चार्टर अगस्ट 1941 को चौधौँ मा हस्ताक्षर भएको थियो जो रूजवेल्ट र चर्चिल को। सोभियत संघ वैज्ञानिकहरु सोभियत संघ र पोल्याण्ड बीच घोषणामा को साइन को मूल बारेमा भन्न गर्दा डिसेम्बर 1941 मा चौथो आयोजित।
तर, दुवै पक्षबाट राजनीतिज्ञ आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 अप्रिल को बीस-पाँचौं अपनाए सहमत हुनुहुन्छ। सैन यो दिनमा पचास देशका प्रतिनिधिहरू भेला भए। 1945 को चार्टर उन्नाइस सय एघार अध्याय र लेख बनेको थियो। Ratification अक्टोबर 24 मा भयो र पाँच सुरक्षा परिषद सदस्य द्वारा अपनाए थियो। तसर्थ, मा क्षणमा यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय द्वारा मानिन्छ संयुक्त राष्ट्र को दिन।
एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सिर्जना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम को एक सबै कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह अमेरिका उपस्थित थियो जो 1943 मा मास्को मा एक सम्मेलन थियो।
अक्टोबर 1943 सोभियत संघ, अमेरिका, बेलायत, चीन को प्रतिनिधिहरु को thirtieth द्वारा अपनाए घोषणा पनि संयुक्त राष्ट्र सिर्जना मा एकदम महत्त्वपूर्ण कदम थियो। गठन गर्ने आवश्यकता को पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय संगठन शान्ति र अमेरिका को सार्वभौम समानता को सिद्धान्त मा आधारित थियो जो सुरक्षा, कायम राख्ने मुख्य उद्देश्य संग, र यो दिन भएको थियो। पहिलो पटक कम्पनी यस प्रकारको एक उच्चारण राजनीतिक चरित्र थियो।
को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम अर्को संयुक्त राष्ट्र सिर्जना Dumbarton Oaks मा 1944 सम्मेलन थियो। त्यहाँ वास्तवमा सबै सहमत सिद्धान्तहरू र संगठनको गतिविधिहरु को व्यवस्थापनमा तंत्र थिए। को सम्मेलन, साथै Dumbarton Oaks मा अपनाए पनि कागजातहरू केही अंक को संशोधन एकत्र गर्ने निर्णय, याल्टा मा अर्को सम्मेलन मा 1945 फेब्रुअरी लगियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सिर्जना अन्तिम र निर्णायक चरण 26 अप्रिल को बीस-पाँचौं समयमा भयो जो जुन 1945 सैन, को विश्व प्रसिद्ध शहर भएको छ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 मा, अक्टोबर 1945 को अन्त्यमा शक्ति मा प्रवेश।
अमेरिका को बहुमत द्वारा चार्टर को ग्रहण मान्छे युद्ध र समाज र अर्थव्यवस्था मामिलामा देशहरूको नजिक सहयोग बिना एक उज्जवल भविष्यको लागि आशा दिनुभएको छ।
सुरुमा संयुक्त राष्ट्र गतिविधिहरु को दायरा, सोभियत सरकारको दृश्य को बिन्दुबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा मात्र समर्थन सामना गर्न भएको थियो। को विधान को मुख्य उद्देश्य नयाँ विश्व युद्ध देखि एक बाड मानिसजातिको हुनुपर्ने थियो।
पश्चिमी शक्तिहरु को प्रतिनिधिहरु को दृश्य को बिन्दुबाट, कम्पनी एक Multifunctional संगठनको रूपमा देखेको थियो। यसको मुख्य कार्य र उद्देश्य अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, समाज र नीति मामिलामा अमेरिका को सहयोग हुनुपर्छ।
क्षणमा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुद्दाहरू र नीतिहरू र सामाजिक अन्तरक्रिया, र सांस्कृतिक मुद्दाहरू, र विज्ञान सम्बोधन।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको विश्व बजार अर्थव्यवस्था आफ्नो सार
ब्रिक्स - कि संगठन छ? संरचना र ब्रिक्स को उद्देश्य
सेवा मा जानकारी: को "मेगाफन टिभी" कसरी असक्षम
एंटीबायोटिक "अम्कोक्सिको": समीक्षा, विवरण
कसरी बर्बाद सामाग्री देखि बगैचा लागि शिल्प प्रदर्शन गर्न?
आलु को भरने। Pies लागि आलु को भरने
किन बच्चाहरु आफ्नो पेट मा बाडुली? हामी सिक्न!
कसरी पैसा अनलाइन बनाउने? समीक्षा यी योजना को वास्तविकता कुरा